Adị M Nnọ Ka Akpa Amụ Ebule -- Dino Melaye
Maazị Melaye kwuputara nke a n'ozi ọ kụpụrụ ụbọchị Tuzdee site n'akara nzìkọrịta ozi 'Instagram' ya. N'ịkọwaru nke ahụ n'isi, o mere ka a mara na ihe e jiri mara akpa amụ èbùlè bụ na a yọgharịchaa ya elu yọgharịchaa ya àlà, ọ kwụrụkwa ebe ọ kwụ, na ọ gaghị ada ada ma ya fọdụzie ịkwụsị ịrụ ọrụ. N'iwète nke ahụ na ndụ ya, o kwuru na na-agbanyeghị ihe ọ sọrọ sị yọgharịba ma ọ bụ chịgharịba ya, e mechaa ihe niile ahụ, na ya ka ga-akwụrụkwa ebe ọ kwụ, dịka akpa amụ ebule, maka na Chineke kàrịrị ndị na-ayọgharị ya.
Anyị ga-echèta na ya bụ nwa amadi bụ onye ndị uwe ojii nwụchikọrọ ma jụkwa ịhapụ ya na mbụ, na-agbanyeghị ntụzi aka ụlọ ikpe nyere ka a tọhapụ ya, ma ọ bụrụ na o mezuo ihe a gwara ya mèé iji gbapụta onwe ya.
Otu ọ dị, mpaghara Maịtama nke ụlọ ikpe ukwu dị n'Abụja nọrọ n'ụbọchị Frayịdee gara aga wee tọhapụ ya bụ nwa amadi site n'inye ya ọnọdụ kpọrọ akpọ ọ ga-agbasò ma mezupụta, ka o wee ga hụ dọkịta ya, dịka o nyere mkpesa na ahụ esichaghịzị ya ike kemgbe abalị anọ nke ọnwa Jenụwarị ahọ a o jiri nọrọ n'aka ndị uwe ojii.